Zimbabwe: Dorcas Moyo Launches 8th Album – Aanlyn Tydskrif in Suid Afrika
Home/Entertainment/Zimbabwe: Dorcas Moyo Launches 8th Album
Gospel music forms an important part of people's aesthetic expression and is a blend of music, dance, poetry, drama — all combined in one. It is, therefore, not a gainsaying when people say gospel music, as a genre, has been crucial in strengthening believer's faith, while also promoting unity in Zimbabwe's colourful history.
Award-winning gospel diva Dorcas Moyo, is among the discerning gospel artistes and is slowly gaining popularity with her music from the time she released her debut album "Ndokusheevedzai Ishe" in 2006.
Her recent release "Bvudzi Rangu Ramera," which is her eighth album, is a clear testimony of her high level of ingenuity, passion and determination to push her music in Zimbabwe and beyond.
"The album's mood can be best described as redemptive and a declaration of faith for those going through trials and tribulations," siad Dorcas.
"Bvudzi riya riya, ramera, ndichararama ndipupure nyasha, chero mukagera nebanga, rangu ririnomera," she sings as she boldly declares God's grace on her life.
Zimbabwe: Soccer Physique Challenges ‘Illegal’ Suspension